Sida loo abuuro qaab Sawire | Abuurista khadka tooska ah
Arnau Apparisi | | muujiye, Maamulayaasha, Tababarada
Maalmo ka hor intaanan kuu soo bandhigin baakad ka badan 300 icons oo leh qaab nashqadeysan bilaash ah.
Maanta si aan kuu siino ciyaar gaar ah ayaan kuu soo qaadaneynaa, casharkaan oo ku saabsan sida samayso qaab si fudud ugu jira Sawirka. Faa'iidooyinka iyo ilaha ay qaababku na siinayaan waa kuwo aan dhammaad lahayn, laga soo bilaabo ku darista qaab dhismeedka illaa caajis iyo sooyaal asaasi ah, si loo sameeyo karti u gaar ah oo lagu duubo dhacdooyinka, maalmaha dhalashada ama amarrada baakadaha.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa abuurid miiska shaqada cusub Muujiye, kiiskeyga waxaan go aansaday inaan sameeyo miis cabirkiisu yahay A4, laakiin waad dooran kartaa cabirro kale.
Miiska shaqada gudaheeda waa inaan ku abuurno a 200px X 200px cabbirka cabirka, Qiyaastani waa mid tilmaamaysa, laakiin waxaan kugula talinayaa inaad curiso laba jibbaaran oo leh lambar fudud, maxaa yeelay markaa waa inaan ku darnaa kuwa kale.
Marka fagaaraheenna la abuuro waa inaan tagnaa tabka eeg -> shaashad muujinaysa, ka dibna ku noqo shaashadda arag-> ku dhaji shabakaddaMarka tan la sameeyo, waa inaan ku hagaajinnaa laba jibbaarada shabaqa laftiisa, waa inaan ka taxaddarnaa markaan u dhaqaaqeyno si uusan u beddelmin, haddii kale qaabka oo dhan ayaa waxyeelloobi doona.
Waxaan doorannaa a midab tilmaamaya laba jibbaaran, looma baahna inay tani noqonayso midabkeenna ugu dambeeya maadaama ay tilmaam un tahay.
Waxaan abuureynaa a lakabka cusub Sawirka iyo lakabka halka laba jibbaarane ay tahay, waan xireynaa, tani waxay u dhaqmeysaa sidii hage waxayna ka hortageysaa in laba jibbaarku uu dhaqaaqo inta lagu gudajiray abuuritaanka qaabka.
Wax kasta oo ku jira gudaha fagaaraha waxaa lagu soo dari doonaa qaabkeena, haddii qeyb ahaan ay soo baxdo waa inaan sameyno xoogaa hagaajin ah.
Haddii ay ku taal geeska, waa inaan nuqul ka qaadnaa shayga dhowr jeer, sidaa darteed waan siinnaa xakameyn / cmd + c ka dibna si xakameyn / cmd + f Si aan ugu dhajino isla goobta, haddii ay tahay geeska waxaan ku riixnaa badhanka kontoroolka / cmd + f saddex jeer.
Waxaan doorannaa shayga oo aan aadnaa badal tab, halkaas ayaan ka heli doonnaa iskudhafyo taxane ah, xusuusnow in iskuduwaha X loola jeedo bidix iyo midig, halka isku-duwaha Y loola jeedo kor iyo hoosba, iskuduwahaas kaliya waa inaan kudarnaa 200px (cabir laba jibbaaran) illaa shayga geeska lagu celinayo dhammaan afarta gees.
Hadday walxaha kaliya waxay ka soo baxaan hal dhinac oo laba jibbaaran waa inaan sameynaa isla howsha, markan kaliya sidaas kaliya waa in lagu celiyaa hal dhinac.
Marka aan buuxinno barxadeena, waxaan furanaa lakabka laba jibbaaran le waxaan ka saareynaa midabka oo waxaannu doorannaa wax walba, labadaba astaamaha iyo laba jibbaaran iyo si toos ahba waxaan u jiideynaa daaqada tijaabada.
Muunadani waxay noo oggolaan doontaa inaan buuxino nooc kasta oo foom ah, oo sameysmaya qaab otomaatig ah oo naga badbaadin doona waqti badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo abuuro qaab muujiye
Ruuben D.G. dijo
Dhibaato ayaan ku qabaa Photoshop, markaan u kala wareejiyo qaababka sawir-qaadaha una gudbiyo sawir-qaade, waxaan helayaa khadadkaas u dhexeeya qaabka iyo hannaanka waana inaan gacanta kaga saaraa. Ma jirtaa waddo aysan iyagu toos ugu soo bixi karin?
Iyo haa, kahor intaadan wax dhihin, waxaan horeyba ugusoo biiray wax walboo dhan
Haye Ruben, waa khadad aad u yar? Hadday sidaas tahay, isku day inaad dhoofiso adigoon tixgelin siin khadadka, waxaa jira waqtiyo la arko oo keliya inta aan la shaqeyneyno barnaamijka. Laakiin waxay noqon kartaa markii aad dhigto laba jibbaarada inaad xariiq ama wax la mid ah dhigtay, iskuday inaad bilowdo bilow inaad tijaabo sameyso haddii dhoofintu kuu shaqeyn weydo, waxaad illowday tallaabo, salaan!
Mariano Peccinetti iyo Surrealism waxay sameeyeen isku duubnaan